ဆီးချိုရောဂါ၏ retinopathy: သင်ဆီးချိုရောဂါမျက်စိရောဂါအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သည် - ကျန်းမာရေးပညာရေး | ဇွန်လ 2022
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကျန်းမာရေး သတင်း ဖျော်ဖြေရေး ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ဆီးဂိမ်း ကျန်းမာရေးပညာရေး နှိပ်ပါ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ရပ်ရွာ ကုန်ပစ္စည်း
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> ဆီးချိုရောဂါမျက်စိနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သည်
ဆီးချိုရောဂါမျက်စိနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သည်
National Eye Institute (NEI) အရဆီးချိုရောဂါမျက်စိရောဂါသည်မျက်စိကွယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ Glaucoma, မျက်စိအတွင်းတိမ်နှင့်ဆီးချို macular ဖောပါဝင်သောဆီးချိုရောဂါမျက်စိရောဂါအမျိုးမျိုးတို့တွင်ဆီးချိုရောဂါ retinopathy သည်ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအကြားအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှု၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
လူတွေကဆီးချိုရောဂါကိုသူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေတယ်လို့ထင်ကြတယ် သွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့် အမေရိကန်မျက်စိအထူးကုဌာန (AAO) ၏လက်တွေ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး Rahul Khurana မှမှတ်ချက်ချသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအဖြစ်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ် စောစီးစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အချိန်မီကုသမှု ပြင်းထန်သောအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ကိုများစွာလျှော့ချနိုင်သည်။
နို ၀ င်ဘာလသည်အမျိုးသားဆီးချိုရောဂါနှင့်အမျိုးသားဆီးချိုရောဂါမျက်စိရောဂါတိုးပွားမှုသတိပေးမှုလဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ရဲ့အချိန်ဟာဆီးချိုရောဂါဟာသင့်ရဲ့မျက်စိကျန်းမာရေးကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပိုမိုလေ့လာဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာ retinopathy စသည့်အခြေအနေများနှင့်အမြင်အာရုံပြsevereနာများသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှမည်သို့ကာကွယ်နိုင်သည်တို့ကိုလေ့လာနိုင်သည်။
ဆီးချို retinopathy ကဘာလဲ?
ဆီးချိုရောဂါ၏ retinopathy သည်မျက်စိအာရုံကြောအနီးရှိမျက်စိနောက်ဖက်ရှိတစ်သျှူးပါးလွှာသော retina ၏သေးငယ်သောသွေးကြောများကိုပျက်စီးစေမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာ (CDC) ၏အဆိုအရဆီးချိုရောဂါသည် retinopathy ဖြစ်သည် ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိလုပ်သားအရွယ်အရွယ်ရောက်သူများအကြားအမြင်အာရုံချို့ယွင်းမှုနှင့်မျက်စိကွယ်ခြင်းကိုအများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိသည် ။ နီးပါး အရွယ်ရောက်သူ ၈ သန်း ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာ retinopathy ရှိသည်, ထိုအရေအတွက်ကိုကြီးထွားရန်မျှော်လင့်နေသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်းဆီးချိုရောဂါသည် retinopathy နီးပါးဖြစ်စေသည်ဟုအစီရင်ခံသည် အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှု၏ 3% ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး။
ကျန်းမာသောမျက်စိတွင်မြင်လွှာသည်မျက်စိ၏မှန်ဘီလူးမှရရှိသည်၊ ထိုအလင်းကိုအချက်ပြအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးထိုအချက်ပြမှုများကို ဦး နှောက်သို့ပို့သည်။ ဒါကသင်မြင်ပုံကိုပါပဲ။
သို့သော်သင်၌ဆီးချိုရောဂါရှိပြီးသင်၏သွေးထဲရှိသကြားဓာတ်ပမာဏသည်မြင့်မားလွန်းပါကသင်၏မျက်လုံးများကစျေးနှုန်းပေးဆပ်နိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသွေးသကြားဓာတ်မြင့်တက်နေပါကသူတို့သည်သင်၏မျက်လုံးများအတွင်းရှိသေးငယ်သောသွေးကြောများပါဝင်သည့်သင်၏သွေးကြောများကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်အဆိုပါသွေးကြောများသည်အစမှအစသို့ရောင်လာနိုင်သည်။ အချို့သူတို့သည်သင်၏ retina ထဲသို့အရည်ယိုဖိတ်ကြသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်သွေးကြောအသစ်များစိုက်ပျိုးရန်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်မှုရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပြproblemsနာအသစ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံး၌သင်သည်မြင်နိုင်စွမ်းပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည်။
အဓိကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည် ဆီးချို retinopathy : nonproliferative ဆီးချို retinopathy (NPDR) နှင့် proliferative ဆီးချို retinopathy (PDR) ။
nonproliferative ဆီးချို retinopathy
nonproliferative ဆီးချို retinopathy ဒီရောဂါ၏အစောပိုင်းအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောသူများသည်မှုန်ဝါးမှုအချို့ကိုဖော်ပြကြသော်လည်းဤအဆင့်တွင်မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာကိုမျှသင်သတိမပြုမိပါ။
အချို့ကျွမ်းကျင်သူများသည် nonproliferative retinopathy ကိုအဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားသည်။ ဒီအဆင့်မှာဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတယ်။
နူးညံ့သော nonproliferative retinopathy: ဒီအဆင့်မှာဆံချည်မျှင်သွေးကြောနံရံတွေကအားနည်းလာပြီး microaneurysms ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။
အလယ်အလတ်မဟုတ်သော noninoliferative retinopathy: microaneurysms ကကွဲသွားတယ်၊ ဒါကြောင့် retina ထဲမှာသေးငယ်တဲ့သွေးတွေစီးစေတယ်။ အားနည်းနေသည့်သွေးကြောများသည်လည်း retina ထဲသို့အရည်များယိုစိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်ငိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယိုစိမ့်မှုသည်လှာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အချို့သောသွေးကြောများသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရပြီး retina သို့သွေးထောက်ပံ့မှုကိုလျှော့ချပေးသည်။
ပြင်းထန်သော nonproliferative retinopathy: ကွဲလွဲမှုများပိုမိုများပြားလာပြီးသွေးကြောများပိုမိုပိတ်ဆို့ခြင်းခံရပြီးနောက်တစ်ဆင့် retina သို့သွေးထောက်ပံ့မှုကိုဖြတ်တောက်သည်။
Proliferative ဆီးချို retinopathy
Proliferative ဆီးချို retinopathy ဆီးချို retinopathy ၏ပိုမိုအဆင့်မြင့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
AAO ၏အဆိုအရသင်ဤပုံစံကိုဖော်ထုတ်လိုက်သည်နှင့်သင်၏ Retina သည်သွေးကြောအသစ်များဖြစ်လာသည်။ ထိုသွေးကြောအသစ်များသည်အလွန်ပျက်စီးလွယ်သောကြောင့်သင့်မျက်လုံးအလယ်၌ဂျယ်လ်ကဲ့သို့သောအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအတွင်းသို့မကြာခဏပွင့်ထွက်သွားတတ်သည်။ ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အခါ၊ သင်၏မြင်ကွင်းကိုဖြတ်ပြီးမျောမျောမျောမျောမျောမျောမျောမျောမျောတိုငျးမြားကိုသတိထားမိပမေညျ။ ဤရွေ့ကား floaters သင်၏ရူပါရုံကိုမိုcloud်းတိမ်သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်၊ အကယ်၍ သင့်တွင် PDR ရှိပါက၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ အမာရွတ်တစ်သျှူးများသည်ထိုသွေးကြောအသစ်များပေါ်၌ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်လွှာလွှာကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ သင်၏မျက်စိနောက်ဖက်တွင်မြင်လွှာကိုပုံမှန်အနေအထားမှဆွဲထုတ်လိုက်သောကြောင့်သင်၏သန္ဓေသားဆဲလ်များသည်သွေးကြောများမှအောက်ဆီဂျင်ကိုပုံမှန်အတိုင်းမရရှိနိုင်ပါ။ ဒီကုသမှုကိုကြာကြာမထားတော့ဘူး၊ ဒီလွှာကန့်လန့်ဖြတ်ချက်ကအမြဲတမ်းအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာ retinopathy ၏အစောပိုင်းအဆင့်များ၌သင်သည်ဘာမှမမှားကြောင်းသတိမထားမိဘဲနေမည်။ သင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုလုံးဝပုံမှန်ပုံရသည်။
ဒါပေမယ့်သင်ကဒါကိုမသိဘဲဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်၏အစောပိုင်းအဆင့်များ၌ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်ပြည့်စုံသောမျက်စိစစ်ဆေးမှုများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏မျက်စိဆရာဝန်ကမျက်စိရောဂါစစ်ဆေးမှုကာလအတွင်းပျက်စီးမှုလက္ခဏာများကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။
မင်းနေပြီလို့ထင်တဲ့အတွက်မင်းရဲ့အမြင်အာရုံကိုဆုံးရှုံးပြီးမျက်စိကွယ်တာကိုမဖြစ်စေပါနဲ့။ သတိပေး Amir Moarefi, MD, MS ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Long Beach တွင်မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သည်။
ဆီးချိုရောဂါ၏ retinopathy လက္ခဏာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မှုန်ဝါးခြင်းမှစတင်သည်။ AAO အရရောဂါလက္ခဏာများသည်အခြားရောဂါလက္ခဏာများလည်းပါဝင်နိုင်သည်။
သင်၏ရူပါရုံ၌ floaters သို့မဟုတ်အစက်အပြောက်
သင့်ရဲ့ဗဟိုရူပါရုံကိုတစ် ဦး ကမှောင်မိုက်areaရိယာ
အကယ်၍ ကုသမှုမခံယူပါကဆီးချိုရောဂါ၏ retinopathy သည်အခြားမျက်စိအခြေအနေများကဲ့သို့သောပုံစံမျိုးကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် နဂါးငွေ့တန်း neovascular glaucoma အဖြစ်လူသိများ။
ထို့အပြင်ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်အားလုံး၏ထက်ဝက်ခန့်သည်အခြေအနေမှာဆီးချိုရောဂါရှိသည့် macular edema (DME) ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည်။ သွေးကြောများမှစီးဆင်းနေသောအရည်အားလုံး၏ရလဒ်အနေဖြင့် macula ဟုခေါ်သောသင်၏လှာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရောင်ရမ်းလာသည်။ ဤသည်မှုန်ဝါးသောရူပါရုံကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သက်ဆိုင်သော: 10 အစောပိုင်းဆီးချိုရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဘယ်အချိန်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တွေ့ဆုံရန်
အဘယ်သူသည်ဆီးချို retinopathy ဖွံ့ဖြိုး?
ဆီးချိုရောဂါရှိသူမည်သူမဆိုဆီးချို retinopathy ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည်။ သင်၌အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ သင်၌ဆီးချိုရောဂါမည်မျှကြာသည်ကိုလည်းသင်စဉ်းစားရမည်။
ဆီးချိုရောဂါပိုကြာလေလေအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆီးချို retinopathy ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ခြေများလေလေဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာခူရာနာကဆိုပါတယ်။
လူမျိုး: အာဖရိကန်အမေရိကန်နှင့်ဟစ်စပန်းနစ်လူမျိုး ဆီးချို retinopathy ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်ရှိသည်ပုံရသည်။
မိသားစုသမိုင်း သုတေသနကအကြံပြုသည် ဆီးချိုရောဂါနှင့်ဆိုင်သော retinopathy ၏မိသားစုသမိုင်းသည်လည်း၎င်းကိုဖွံ့ဖြိုးရန်သင့်အခွင့်အရေးများကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန် - အကယ်၍ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုရောဂါကိုဖွံ့ဖြိုးလာပါက၊ နောင်တွင်သင်၏ဘဝတွင်ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေတိုးများလာသည်နှင့်အတူတူ၊
အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများ သင်၌မြင့်မားသောကိုလက်စထရော (သို့) သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားပါကဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာ retinopathy ဖွံ့ဖြိုးရန်အန္တရာယ်ပိုများပါသည်။
အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းအဆင့်များ၌ဆီးချိုရောဂါ၏ retinopathy သည်ကုသနိုင်သည်။
သငျသညျဆီးချို retinopathy ကနေအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးနေကြသည်ရင်တောင်ငါတို့ယခုကစီမံခန့်ခွဲရန်ရွေးချယ်စရာသစ်တစ်ခုအစုံရှိသည်, ဒေါက်တာ Khurana ရှင်းပြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဆီးချိုရောဂါရှိသည့်အခါသင့်မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်နှင့်တွေ့ရန် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
အဆိုပါဆီးချို retinopathy ကုသမှုရွေးချယ်စရာများပါဝင်သည်:
ပိုမိုတင်းကျပ်သောသွေးသကြားထိန်းချုပ်မှု: သင်၏မျက်စိအတွင်းရှိသွေးကြောများသို့မရောက်ရှိခြင်းမှကာကွယ်ပါ။ နောက်ထပ်ကုသမှုမလိုအပ်ပါ။ သင်ဤတာဝန်ကိုသင်အကူအညီလိုအပ်ပါကသင်၏ endocrinologist နှင့်စကားပြောနိုင်သည်။
ဆေးဝါး: သင်၏မျက်စိဆရာဝန်ကစတီးရွိုက်ဆေးများသို့မဟုတ်ဆေးကိုအကြံပြုနိုင်သည် VGEF ဆေးဝါးများ ။ VGEF ကိုဆန့်ကျင်သောကုသမှုများသည်သွေးကြောများကြီးထွားမှုကိုအားပေးသောသွေးကြောဆိုင်ရာ endothelial growth factor ဟုခေါ်သောသင်၏ဆဲလ်များထုတ်လုပ်သည့်ပရိုတိန်းကိုတားဆီးရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောဆေးဝါးများဖြစ်သည်။ ထိုးဆေးသည်သင်၏အမြင်အာရုံကိုထိခိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့နည်းစေသည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးကြောများကြီးထွားမှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်တားဆီးနိုင်သည်။ အဓိက VGEF ဆေးသုံးမျိုးဖြစ်သည် Avastin , Lucentis နှင့် Eylea ။
လေဆာခွဲစိတ်ကုသမှု: သင့်တွင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော (သို့) ပြန့်ပွားခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာ retinopathy ရှိပါကသင်သည်လေဆာရောင်ခြည်ကုသမှုအမျိုးအစားအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လေဆာခွဲစိတ်မှု လည်း panretinal photocoagulation အဖြစ်လူသိများ။ အမှန်ကတော့သူကမြင်လွှာရဲ့အနားအစွန်အနားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့သွေးကြောအချို့ကိုဖယ်ရှားပေးတယ်။
Vitrectomy: အေအိုအို၏အဆိုအရဤခွဲစိတ်ကုသမှုသည်ဆီးချိုရောဂါ၏အဆင့်မြင့်ပုံစံဖြင့်လူတစ် ဦး အတွက်သင့်လျော်မှုရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည် ဖန်ထည်အရည် gelel အချို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်မျက်စိနောက်ဘက်သွေးကြောများယိုစိမ့်ခြင်း (တစ်ခါတစ်ရံအမာရွတ်တစ်သျှူး) ။ ထိုအရာဝတ္ထုများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်သင်မြင်နိုင်ရန်အလင်းကိုနောက်တစ်ကြိမ်စနစ်တကျအာရုံစိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
မည်သည့်ကုသမှုမျိုးမဆိုကဲ့သို့ဆီးချိုဆိုင်ရာ retinopathy အတွက်ကုသမှုအမျိုးမျိုး၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။
ဥပမာ၊ panretinal photocoulation သည်အလွန်ထိရောက်နိုင်သည်ဟုဒေါက်တာ Moarefi ကပြောသည်၊ သို့သော်သင်၏ဗဟိုအမြင်အာရုံကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်အခြေခံအားဖြင့်သင်၏အရံအမြင်ကိုစွန့်လွှတ်နေသည်။ ၎င်းသည်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်မောင်းနှင်ခြင်းအပါအ ၀ င်သင်၏နေ့စဉ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအချို့ကိုသင်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဆီးချိုရောဂါ၏ retinopathy သည်အဆင့်မြင့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိနေပြီဆိုပါကပျက်စီးမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါဟု Dr. Khurana ကပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်သင်၏မျက်စိဆရာဝန်ကသင်၌ရှိနေသေးသည့်အမြင်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်နောက်ထပ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကိုရပ်တန့်ရန်အလေးပေးလိမ့်မည်။
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုအမှန်တကယ်အလေးအနက်ထားရန်နှင့်သင်၏စစ်ဆေးခြင်းအားတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်ဟုဒေါက်တာ Moarefi ကရှင်းပြသည်။
ဆိုလိုသည်မှာဆီးချိုရောဂါရှိသူတိုင်းသည်ပြည့်စုံသောမျက်စိစစ်ဆေးမှုကိုအချိန်ဇယားဆွဲသင့်သည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ထို့ကြောင့်သင်၏မျက်စိဆရာဝန်ကသင်၏မျက်စိ၏မြင်ကွင်းကျန်းမာရေးကိုအကဲဖြတ်ပြီးလာမည့်ပျက်စီးမှုလက္ခဏာများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ သင့်ကလေးအားမြင်လွှာ၏အမြင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်သင့်ကလေးအားချဲ့ရန်သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်စေသည့်မျက်လုံးပေါက်များကိုသင့်ဆရာဝန်ကပြလိမ့်မည်။
သင်၏မျက်စိဆရာဝန်ကသင်၌ပြင်းထန်သောဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာ retinopathy ရှိသည်ဟုသံသယရှိပါက fluorescein angiogram ဟုခေါ်သောရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုကိုလည်းသေချာစေနိုင်သည်။ fluorescein angiography (အက်ဖ်အေအက်ဖ်အေ) သည်သင်၏သွေးပြန်ကြောများတွင်အရောင်ဆိုးဆေးထိုးသွင်းခြင်း၊ ကင်ဆာသုံးပြီးသွေးကြောများမှဖြတ်သန်းသွားသောအခါယင်းတို့၏သွေးကြောများကိုဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ကင်မရာသုံးခြင်းပါဝင်သည်။
ဒေါက်တာ Moarefi ကပြောကြားသည်မှာသင့်တစ်နှစ်တာမျက်စိကွယ်မှုသို့မဟုတ်အမြင်အာရုံနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုတစ်စုံတစ်ရာမခံစားရရန်သေချာစေရန်အစပိုင်းတွင်တစ်နာရီခန့်ထားပါ။
သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်းဖြင့်ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာ retinopathy မဖြစ်ပေါ်စေရန်လည်းသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အမျိုးသားဆီးချိုရောဂါနှင့်အစာခြေခြင်းနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာအင်စတီကျု (NIDDK) ၏အဆိုအရသင်သည်သင်၏သွေးသကြားပမာဏကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အာရုံစူးစိုက်ပါကသင်၏မျက်စိအတွင်းရှိသွေးကြောများကိုပျက်စီးစေနိုင်သောနာတာရှည်မြင့်မားသောအဆင့်များမရခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
သို့သော်အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများအနက်သင်သည်သင်၏သွေးပေါင်ချိန်နှင့်ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အထူးဂရုပြုသင့်သည်။ NIDDK မှခေါ်သောဤအခြေအနေ ၃ ခုကိုစီမံခြင်းဖြင့်ဆီးချိုရောဂါ ABCs သည်သင့်အားကျန်းမာစေပြီးသင်၏မျက်စိကိုကျန်းမာစေနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အသစ်သော floaters သို့မဟုတ်အလင်းတောက်ခြင်းများသတိပြုမိပါက၎င်းသည်ဆီးချို retinopathy အလွန်အဆင့်မြင့်သောဖြစ်ရပ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော retinal detachment of sign တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာမဖြေရှင်းပါကအမြဲတမ်းအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Protonix vs. Nexium: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Phendimetrazine vs Phentermine: အဓိကကွာခြားချက်များနှင့်တူညီခြင်း
Wellbutrin xl နှင့် Wellbutrin sr အကြားခြားနားချက်
propranolol 10 mg ကိုဘယ်လိုရပ်ရမလဲ
melatonin 5mg ကိုငါဘယ်လောက်သောက်နိုင်လဲ
trintellix ကိုနံနက် (သို့) ညဘက်တွင်သောက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်